अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको कङ्ग्रेसमा पहिलो सम्बोधन, के–के भने ? | Ratopati
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको कङ्ग्रेसमा पहिलो सम्बोधन, के–के भने ?
राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पुगेको पूर्वसन्ध्यामा बाइडेनले अमेरिकी इतिहासमै खोप अभियानमा सफल उपलब्धि हासिल भएको बताए । उनले अहिलको राष्ट्रिय प्रयत्नलाई देशको अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण गर्ने तथा दोस्रो विश्वयुद्ध देखिकै सर्वाधिक ठूलो विषय बनेको रोजगारी योजनामा रहेका विमतिलाई हटाएर समानतामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
अमेरिकी प्राइमटाइम टेलिभिजन सम्बोधनमा प्रायः राष्ट्रपति बाइडेनले एउटा भनाई सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्, त्यो हो अमेरिकाले पुनः गति लिएको छ । उनले सामान्यतया कोरोनाभाइरसको महामारीबाट सिर्जित विपदलाई अमेरिकाले सुल्झाउन लागेको तथा ट्रम्प प्रशासनले निम्त्याएको अस्थिरता समाप्त भएको बताउने गरेका छन् ।
राष्ट्रपति बाइडेनले ट्रम्पको कार्यकालमा पुगेको क्षतिलाई उल्ट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई आफ्नो विदेश नीतिले पुनः सम्बोधन गर्न लागेको बताए ।
उनले ट्रम्पका एकलकाँटे नीतिको आलोचना गर्दै कङ्ग्रेसमा भने, ‘कुनै पनि मुलुक एक्लै सफल हुन सक्दैन ।’ चीनका सम्बन्धमा राष्ट्रपति बाइडेनले बेइजिङले सर्वोच्चता वा एकाधीकार खोजिरहेको भए पनि आफूहरुले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको तर कुनै किसिमको द्वन्द्व नचाहेको स्पष्ट गरे ।
अमेरिकी घरेलु मुद्दाहरुका सम्बन्धमा बाइडेनले डेमोक्रेटिक पार्टीको लामै योजना सुर्नाए, जसमा प्रहरीमा सुधार, आप्रवासनमा सुधार र बन्दुक नियन्त्रण समेटिएका थिए । यी मुद्दाहरु अमेरिकी समकालीन राजनीतिका निकै संवेदनशील विषयहरु हुन् ।
‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र जनताबीचको विश्वासलाई पुनः स्थापित गर्न हामी एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा रहेको प्रणालीगत जातीय विभेदलाई जरैदेखि समाप्त गर्नु पर्दछ’ बाइडेनले भने । उनले अमेरिकी तल्लो सदनले पहिल्यै पारित गरिसकेको प्रहरी सुधार सम्बन्धी विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न माथिल्लो सदन सिनेट समक्ष आग्रह पनि गरे ।
उनले देशकै सर्वाधिक चर्चित विषयमा मिलेर कार्य गर्न रिपब्लीकन र डेमोक्र्याट दुबै दलसँग आग्रह गरे । राष्ट्रपति बाइडेनले भने, ‘अध्यागमनका बारेको हाम्रो थकित युद्ध अब अन्त्य गरौं ।’
वार्षिक चार लाख भन्दा कम आय हुने अमेरिकीले अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने छैन । –एएफपी
क्लासिक टेकका फाउन्डर प्रमेश खरेलका पिताको निधन प्रति कम्पनीद्वारा दुःख व्यक्त